Soo dejisan Kodi 16.1 – Vessoft
Streaming video, Ciyaaryahan Media
Soo dejisan Kodi
Kodi – software awood leh inay u beddesho your computer ee xarunta warbaahinta ama tiyaatarka guriga. Kodi u saamaxaaya in ay ciyaari audio iyo video files qaabab badan, photos aragtida, shaqo sanamyadooda disk, ciyaaro TV iyo video streaming, hubi cimilada iwm software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan maktabad warbaahin ah oo la helo files ee qaybaha kala duwan. Kodi awood u gacanta ugu fog ee software-ka iyadoo la isticmaalayo qalab mobile ama consol kontaroolka fog. Software ka kooban qalab a badan reserved oo u saamaxaaya in ay ballaarinta fursadaha adigoo isticmaalaya daro kala duwan.
Support for badan oo qaabab warbaahinta
Loo maqli karo ee files warbaahinta, TV iyo video streaming
Shaqada sanamyadooda disk
Kartida ee maamulka fog
Muujiya macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan nidaamka kombiyuutarka aad
Kodi Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Playkey 1.2.25.38649
Games Streaming video Adeeg ciyaaraha daruurtii in Radidiyaha kulan ku technology ee video qulqulaya. Software waxay bixisaa loo maqli karo oo ka mid ah kulan ugu hawl badan ee ay hindiseen oo la soo koobin nidaamka hooseeyo.
Streaming video Qabashada Screen Qalab Popular baahinta il warbaahinta in ay internet-ka ku. Software wuxuu taageeraa goobaha warbaahinta si loo kordhiyo tayada video ah.
العربية, English, Українська, Français... XSplit Broadcaster 2.8.1607.1944
العربية, English, Українська, Français... Megacubo 11.1.5
English, Українська, Français, Deutsch... JetAudio 8.1.4
WinSCP 5.9.2 Standard iyo Portable
Files Tool koobiyenta faylasha dhexeeya your computer iyo server aamin ah. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad edit faylasha qoraalka hoose iyo fog.
English, Français, Español, Deutsch... YAC 6.7.141
English, Français, Español, Deutsch... EditPlus 4.1
English, Français, Español, Deutsch... Zona 1.0.7.6